Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Fikradaha ugu sarreeya ee dib-u-habeynta musqusha ee miisaaniyadda
2020 / 11 / 12 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9887 0
Waxay u muuqan kartaa wax aan macquul aheyn bilowga, laakiin fikradda dib u habeynta musqusha ee miisaaniyadda gabi ahaanba waa la gaari karaa. Way adag tahay in la hubiyo, laakiin aakhirka, kama baxdo waxqabadka ama hirgelinta. Kaydinta kharashyada dhinacyo badan ayaa fure u ah in musqusha dib u habeyn lagu sameeyo miisaaniyadda, laakiin taasi macnaheedu maahan inaad ka tanaasusho qodobka tayada gabi ahaanba. Taasi waa sababta soo socota ay u tahay liistada talooyinka ugu fiican iyo fikradaha kaa caawin kara inaad ku guuleysato dib-u-habeynta musqusha intaad miisaaniyadda ku jirto;
Isticmaalka alaab qiimo jaban u eg
Marka ay timaado dib u habeynta musqushaada, ka dib dayactirka iyo dib u habeynta qalabka jira waxay umuuqataa xulasho ku haboon hadaad sidaa ugu foogantahay inaad keydiso lacag aad u tiro badan. Laakiin dhinaca kale, haddii alaabtaan aan dib loo cusboonaysiin karin oo aad u baahan tahay mid cusub ama mid cusub ka dib markaad tixgeliso muuqaalka jaban ee alaabada qaaliga ah ee aad isticmaali lahayd ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu keydin karo wax badan qadarka lacagta.
Halkii aad ka aadi lahayd sagxadda dhabta ah ee alwaaxda, waxaad sahamin kartaa xulashooyin kale sida sagxadda vinylalkohol raaxo, waa wax joogto ah oo aan dhaqso u daali doonin waana xulasho lagu talin karo, in lagu bilaabo.
Dib u cusbooneysii tubbada halkii aad dhigi lahayd
Waxay dhacdaa markaad dib u habeyn ku sameyneyso musqushaada, inaad rabto inaad wax walba ka qaadato oo aad wax walba ugu beddesho noocooda cusub. Sida tixgelinta tuubadaada, waxaad si farxad leh u jeclaan laheyd inaad bedesho ama bedesho, laakiin taasi waa lacagta meesha taal ee aadan haysan. Miyaanay ahayn fikradda guud ee dib-u-habaynta in lagu sii joogo miisaaniyadda?
Haa way tahay. Taasi waa sababta halkii aad ugu beddeli lahayd tubbada musqushaada laguugula talinayo inaad dib u cusbooneysiiso sida ugu wanaagsan ee aad kari karto. Haddii ay jiraan dhibco jaalle ah ama dildilaacyo aan qarsooneyn, ka dib isku day inaad dib u cusbooneysiiso ama ku dayactirto. Qiimo yar ayey ku kacaysaa in la hagaajiyo markaa la beddelo tuubbada iyo sidoo kale qubeyska sidoo kale.
Ku cusbooneysii armaajooyinka qalab cusub oo xiise leh
Markaad awalba miisaaniyadda ku jirtay, markaa ficillada iyo xulashooyinka aad qaadatid waxay go'aan ku gaarayaan inaad ku ekaato ama aad si tartiib ah uga leexato. Taasi waa sababta loogula taliyay in halkii aad ka beddeli lahayd armaajooyinka musqushaada oo aad ku darto dollar dheeraad ah kharashka, isku day inaad beddesho qalabka qaarkood. Haddii loo baahdo, la soo bax dhammaan qalabka ku rakiban golahan wasiirrada duugga ah ee daxalaystay oo soo iibso wax cusub ama madadaalo leh si aad ugu beddesho muuqaalka ama muuqaalka guud ee armaajooyinka musqusha.
Tani waxay baabi'in doontaa muuqaalka shimbiraha ee kuwani horey u lahaayeen waxayna ku siin doonaan musqushaada lahjad cusub oo casriyeysan. Markaad iibsanayso qalabkan cusub, iskuday inaad sida ugu fiican uhesho si aad uhesho wax ku habboon godadka golahaaga jira ama sifiican ula jaan qaadaya. Waxay kuu badbaadin doontaa xoogaa shaqo oo ah inaad ka qoddo godad cusub golaha wasiirada.
Ku rakibidda qasabad cusub
Haddii ay jiraan hal shay oo kor u qaadaya dhammaan musqulahaaga adiga oo aan taaban wax kale, markaa waa tuubada saxanka ku jirta. Dad badan ayaa aadi lahaa saxanka oo dhan, laakiin maadaama ay tahay inaad sameyso intaad ku jirto miisaaniyadda, waxaa lagugula talinayaa inaad u tagto oo keliya qasabadda la dul dhigo dusha saxanka. Dhamaan noocyada kala duwan ee aad ka heli karto qasabadaha, raacida midabka madow waa waxa ugu casrisan ee aad sameyn karto.
Wowow qasabada ayaa ku siineysa heerkaas dheeriga ah ee kalsoonida leh injineernimadooda heerka xiga taas oo ku xirnaan doonta inay ku haboonaato rabitaankaaga iyo tayada gaarka ah ee aad rabto inaad naftaada la qabsato. Waa mid aad u qurux badan, loona farsameeyay kaamil ahaanta, waana ikhtiyaar aad u qiimo jaban oo aad dooran karto inaad raacdo. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad raacdo tuubbo laba-gacan-qabsi ah sidoo kale maadaama ay kuu badbaadin doonto xoogaa lacag ah mustaqbalka fog, labadaba kuleylka iyo biyaha qabow-ba waxaa lagu qiyaasi karaa hal qasabad ka dibna labo ayaa loo sameynayaa isla qaddarka shaqada. Maadaama aad ku jirto miisaaniyad, waxaad u baahan tahay inaad si fiican uga fikirto waxyaabaha.
Ku rakibida qubeyska horay loo sii diyaariyay
Markay tahay bedelida qubeyskaaga, waxaa lagugula talinayaa inaad marka hore hubiso in qubeyskaaga hadda jira uu yahay mid aan la isticmaali karin, iyo si loo dhameystiro dib u habeynta jikadaada si guul leh, waa inaad bedeshaa ama aad bedesho qubeyska. Laakiin markay tahay bedelida qubeyska, tixgeli inaad iibsato qubays horay loo soo hindisay, si aad ugu bilowdo.
Kaliya maahan ikhtiyaarradan kharash-ku-ool ah ee ay leeyihiin oo ay tixgeliyaan daryeelaha musqushaada, laakiin sidoo kale waxay kuu badbaadinaysaa dadaalka dheeriga ah ee lagu sifeynayo ama lagu xirayo walxaha qaabka shaqaaleynta xirfadle si ay u sameyso. Iska yaree qarashkaaga intaad ka beddeleyso qubeyska buuxa oo aad u aado ikhtiyaarka ugu fiican ee suurtagalka ah ee aad heshay, kaasoo ah iibsashada iyo dejinta qubeys horay loo soo hindisay.
Rinjigaaga sagxadda alwaaxa
Marka hore, sagxadda adag ee adag waa inaysan noqon istaraatiijiyaddaada ugu dambeysa ama doorashadaada ku saabsan sagxadda musqusha; waxaa jira ikhtiyaarro kale oo ka wanaagsan oo kharash-ku-ool ah oo jira. Laakiin maadaama aad horey u haysatay, taas oo hadda si xun u jajabtay oo dillaacday, markaa waa inaad bedesho ama aad bedesho. Laakiin markan, halkii aad ka raaci lahayd sagxadda qoryaha adag, iskuday faleebada maadaama ay ka difaac badan yihiin dildilaaca ama dhoofinta sababtoo ah qoyaan ama dhibaatooyin kale oo la xiriira.
Laakiin wali waxaad ku jirtaa miisaaniyad, sharadka ugu fiican ee aad halkan kuheli karto waa inaad rinjiyeysid sagxadaada alwaax iyadoo lagaaashanayo caawimo qaar ka mid ah dhaldhalaalka difaaca maadaama ay kaa dhigeyso inaad si muuqata u daboosho kharashka iyo waxyeelada qoyaanka iyo waxyaabaha kale ay sameyn lahaayeen
Si fudud u rinji ka dibna u soco, sida oo kale. Waxay kaa caawin kartaa inaad si firfircoon ula soo baxdo dhammaan waxyaabaha quruxda badan iyo xoogga musqushaadu ay bixiso. Dhinaca kale, musqushaadu waxay hoos udhigi doontaa hoos dhab ah oo ah nooc casri ah oo casriyeysan oo casriyeysan.
Hore:: Wowow Madoobaha Madbakha Madow: Qaabka iyo Shaqeynta Hal Qalab Next: Sida loo Xulo Qasabada Musqusha
2021 / 02 / 04 13100
2021 / 02 / 03 12922